FileCatalyst သည်သုံးစွဲမှုအခြေခံစျေးနှုန်းဖြင့် Cloud-based ၀ န်ဆောင်မှုသစ်၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » စားသုံးမှု-အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ FileCatalyst မိတ်ဆက်နယူးတိမ်တိုက်-အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း, FileCatalyst Spaces,
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူဦးဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတစ်ခုEmmy®ဆုရရှေ့ဆောင်, သူတို့ကအသစ်တစ်ခုကို cloud-based turnkey ဖိုင်လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်; FileCatalyst Spaces ။ FileCatalyst Spaces သည်အသုံးပြုသူများမှသာမိမိတို့၏စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့်သူတို့လွှဲပြောင်းအဆိုပါဒေတာအတွက်ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လစဉ်-based စျေးနှုန်းမော်ဒယ်ပေးပါသည်။
FileCatalyst Spaces ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကို leverages FileCatalyst လုပ်ငန်းအသွားအလာအဖြစ် FileCatalyst'' s ကိုစီးပွားဖြစ် UDP ကို-based အစာရှောင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာ။ FileCatalyst Spaces WAN သို့အနှံ့ရွေ့လျားဖိုင်လွှဲပြောင်းအပေါ်တယောက်က FTP protocol ကို, packet ကိုအရှုံးနှင့်အောင်းနေချိန်ရာအရပျနသောကန့်သတ်ကျော်လွှားနေဖြင့်နှေးကွေးဖိုင်လွှဲပြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။
မိုဃ်းတိမ်-based ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း, FileCatalyst Spaces ဆိုခေတ်သစ်ဘရောက်ဇာကနေလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံဝန်ဆောင်မှု hosting နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်အဆုံးအသုံးပြုသူထံမှသိမ်းဆည်းခြင်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များလျော့ချ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒေတာသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပေးအပ်သည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်စေခွင့်ပြု FileCatalyst Spaces သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် Cloud သိုလှောင်မှုဆောင်ခဲ့၏ထို option ရှိသည်။ FileCatalyst Spaces, Wasabi, AWS S3, Azure မိတ်ဆွေအတွက် blobs, Google Cloud သိုလှောင်မှုနှင့် Backblaze B2 ထောက်ခံပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ကာ, FileCatalyst Spaces အဖွဲ့အစည်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်များအတွက်စွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်း FileCatalyst အစဉ်မပြတ်, Per-နာရီသို့မဟုတ် GB အထိမော်ဒယ်များ Per စားသုံးမှုမှတဆင့်လိုင်စင်နိုင်သည့် server, ။
Shareable web-based Folders: ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအစုံဝေမျှဖို့အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများအတွက် shareable ဖိုလ်ဒါဖန်တီးအခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်း။
ဘရောက်ဇာကို plugin ကိုသို့မဟုတ် Non-အရှိန်မြှ upload / download များအတွက်လိုအပ်သော client ကိုလျှောက်လွှာမရှိပါ။
ပါဝင္ရန္ FileCatalyst'' s ကိုတစ်ဦးအဘို့မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက် & တိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများ၏ဒါရိုက်တာ, Elton Carneiro, webinar ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 21st, 2019 (11AM - 12PM EST) ပေါ်မှာဤဝန်ဆောင်မှုအသစ်အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းပါပဲ။ Spaces တရားဝင် webinar ပြီးနောက်စတင်ပါလိမ့်မည်. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် FileCatalyst Spaces ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် sign up ကို, အလည်အပတ်ခရီး filecatalyst.com/solutions/filecatalyst-spaces /.
အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်း မိုဃ်းတိမ်ကို မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံသည့်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်မှတ်တမ်းလွှဲပြောင်း FileCatalyst မီဒီယာ SaaS လှံ & Arrows 2019-02-06
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ - အငယ်တန်းအဆင့်
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့်ဖွင့် LiveTouch ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်မောင်လေးကလည်းပြိုင်ပွဲလိုင်းများများအတွက်အားရှင်းလင်းရန် Winner ဖြစ်တယ်